SAWIRRO: Muxuu Siciid Deni kala hadlay saraakiisha Ciidanka Asluubta? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Muxuu Siciid Deni kala hadlay saraakiisha Ciidanka Asluubta?
June 22, 2022 Xuseen 10
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka Asluubta Dowladda Puntland.
Deniyow waxaad fashayba fashaye maanta go’aan rageed gaar oo Puntland midee Xamarna xawda jar illaa dagaal ayaa laguu iclaamiyey meeshaad abaal ka sugaysay. Waxaa sidaas loo yeelayaana waa naqaan oo waa aarsi ka dhan ah beesha daarood. Xataa Madoobe sida loo galo soo agaada. Mar hore waxaa lagu qancinayaa in la yiraahdo Gedo ayaa lagula qabanayaa ka dibna ciidanka qabtaa wuxuu qaban doonaa Jubbaland inteeda kale. Keenyana baddaa loo saxiixayaa.
waaar horta ree pugland oohin badanaa . gurguurte wali kursigaba kuma fadhiisane, oohinta bilaabatey maxey tahey. ninka wakhti siiya si loo ogaado jihada uu qaadayo. qabiilba idin madax mareeyareeya baroorta
Deni waa nin qoyan Biyo iskama dhowro
Ma waxaad leedahay puntlan haku biirno Somaliland. Saqiirku wuu ku kaadsha duudka hooyadiis, kan carankaana qaniiyo ayuuba ugu daraa. Haddii dhulka la dhigana waa ooya.
Puntlan waa Saqiir saaran duudka Xamar
saqiirna kama maarmo duud hooyo.
Puntland Xamarna ka dawladsan, Somaliland warkeedaba daa. Reer reer Puntland maaha dad suga inta usha dushooda lagu dhufanayo ee dad garankara waxa lala damacsan yahay marka la fiiriyo tallaaabooyinka ka dhanka ah ee Gurguurte qaaday muddadii bisha ahayd ee uu xukunka joogay. Soomaaliduna waxay tiraahdaa af caytamay ninkiisuu ku yaallaa taas oo loola jeedo qof cayan ayaa wax caaya. Cidda lala hadlayaana adiga maaha ee dad reer Puntland ayaa aaraa isku dhaafsanaya sida ugu habboon ee ay cadow neceb uga tashan lahaayeen. Shacbiga Puntland ayaa la yaabban maamulkooda waxa Xamar ku jaanjaamay.
Iskana sug duuggeeda in Puntland saqiir noqoto iyo in ay isku fillaato.
Ninkasta ee xil madaxweyne ka qabta Somalia MA yeelan Karo Kaloonin uu wadanka ku maamulo…. waayo waxuu Dareen ka qabaa reer puntland. Nin dareen qaba waa nin duleysan oo laciif ah. Caydiid iyo cabdulqaasim iyo culusow wey soo weerareen reer puntland weyna ku khasaareen. Culusow waxuu leeyahay track record… oo waxa laga filan Karo waa la wada ogyahay.
Hadii uu xaataa soo qaadin weeraro military… sidiisii hore….waxuu qaadin mid siyaasadeed iyo mid hoose ee ah xin iyo cunaqabateen. Reer puntlandna Wali waxay ku hayn somaliweyn iyo nacnacdii lagu yaqaaney. Jugjug meeshaadii joog.
Haddii Puntland faraha kala baxdo koofurta airport iyo dekedda bay isku qabsanayaan nimanka maanta ku dowladaynayaa 3 bil shimbir Mogadishu kuma harayso oo aan ka ahayn nimankaas
Waxaa la yiri doqon usha agteeda ku dhufo hadday dareemi weydana dusheeda ku dhufo.
Bil ayuu Culusow madaxweyne yahay wuxuuna qaaday 5 tallobo oo Puntland ka dhan ah:
1. Inuu kii codka siiyey ee Deni u quuri waayey waa mahadsantahay ee aan is aragno, mar Deni codsadayna waa ka cudur daartay.
2. Talo haba yaraatee ma weydiin oo Soomaalidu waxay tiraahdaa geel jiri isagoo og halka uu usha ka jarayo ayuu saaxiibkiis weydiiyaa halka usha laga jari karo si uu saaxiibkiis u qadariyo.
3. Culusow saxiibadiis iyo saxaafadda taageertaaba waxay dacaayad ku fureen Deni ayagoo leh wuu guuldarraystay iyadoo Deni ka mid ahaa 37 musharax ee guuldarraystay midkoodna aa la soo qaadin Deni mooyee.
4. Dubay oo ciidamada u biili jirtay Denina wuxuu u aaday inuu ka soo xiro dhaqaalahaas sida xoguhu sheegayaan.
4. Guddigii doorashadana Puntland waa laga reebay si aanay dastuurka lug ugu yeellan. Durba waxaa la bilaabay qaylo dhaan la yiraahdo “yaa irir ah iyo kacooy”
Waxaa soo socdaana caaqil waa dareemi karaa doqonna yeelkeed.
Gabagabadii Culusow waa Culusowgii oo ka sii xun. Puntland sidaan dareensanahay meel fog ayaa laga doondooni doonaa.
Horta Deni iyo ilmo Diyaano ma waxay ku DAGAALAMEEN Xamar mise Dekedda Xamar.
Afkaada iyo dhegahaadu isma maqlaan.
Saqiir leh, anigaa nabadeeyo Aabo iyo hooyo soo lamid maahan Dowladda Xamar anigaa nabadeeyo.
PUNTLAND ILAAH MAAHEE CIDNA UMA BAAHNA,
IIDOORLAND KALIGII MEEL MA ISTAAGI KARAAN REERAHA LA DEGA SIDA SAMAROON,CIISE,HARTI WAQOOYI AYAY INTAA BARYO,LAALUUSH IYO MUNAAFAQAD KU WADAAN KUNA DHISANYAHAY MAGACA SOOMAALILAND.
HAWIYE HAL MAAMUL OO UU KALIGIIS LEEYAHAY WAA DHISAN WAAYAY TUSAALE HIRSHABEELE IYO GALMUDUG WAA ZERO.
MARKA PUNTLAND WAA MAAMULKA KALIYA OO KALIGII TAAGAN UMA JOOGAAN AMISON KALIGOOD AYAA IS DIFAACA AYAGOO LEH IMISA CADOOW IIDOOR,MOORYAAN,SHABAAB,IYO DAACISH.
MAASHALAH VIVA PUNTLAND